प्रदेशलाई अस्पताल हस्तान्तरणः हेर्नुस्, कुन अस्पताल कुन प्रदेशमा ? - Everest Dainik - News from Nepal
प्रदेशलाई अस्पताल हस्तान्तरणः हेर्नुस्, कुन अस्पताल कुन प्रदेशमा ?
काठमाडौं, माघ ९ । सरकारले प्रदेशभित्रका अस्पताल प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी सातै प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्रीलाई अस्पताल हस्तान्तरण गर्ने अन्तिम तयारी गरेको हो ।
प्रदेश १ मा रहेको कोशी अञ्चल अस्पताल, प्रदेश २ को नारायणी उप क्षेत्रीय अस्पताल, प्रदेश ३ को भरतपुर अस्पताल, प्रदेश ५ को भेरी अञ्चल अस्पताल र सुदूरपश्चिमको डडेलधुरा उप क्षेत्रीय अस्पताल प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिएको छैन।
याे पनि पढ्नुस चार दिनदेखि सरकारी अस्पताल ठप्प हुँदा बिरामीहरु विचल्लीमा
यी अस्पताललाई टर्सरी हस्पिटलका रुपमा विकास गर्ने बताइएको छ। भने प्रदेश २ गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताललाइ प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गर्न लागिएको छ ।